रुकुम पूर्वमा आलु उत्पादनमा किन आयो कमी ? « Postpati – News For All
कोरोना भाइरस दाङ पक्राउ नेकपा रोल्पा राशिफल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओली विप्लव नेकपा प्रधानमन्त्री
कोरोना प्रकोप : सङ्क्रमणसँगै मृत्युदर पनि बढ्यो, ८ दिनमै ३५ जनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ५२५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १०९ जना डिस्जार्ज
रुकुम पूर्वमा आलु उत्पादनमा किन आयो कमी ?
पुष १९, रुकुम । रुकुम (पूर्व) मा यस वर्ष आलु उत्पादनमा कमी आएको छ । सबैभन्दा बढी आलु उत्पादन हुने जिल्लाको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा यस वर्ष आलु उत्पादनमा आधाभन्दा बढी कमी आएको छ ।
जिल्लाको आलु खानको लागि निकै स्वादिष्ट पनि हुने गरेको छ । मानिसले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्ने र अर्गानिक आलु उत्पादन गर्ने गर्छन् ।
गत वर्ष १५ क्विन्टल आलु उत्पादन गर्न सफल भएकोमा यस वर्ष भने मुस्किलले त्यसको आधा मात्रै आलु उत्पादन भएको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–२ का कृषक माया पुनले बताउनुभयो ।
उहाँजस्तै वडा नम्बर १ मैकोटकी समसाली पुन पनि आलु उत्पादनमा कमी आउदा चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले गत वर्ष तीन क्विन्टल आलु उत्पादन गर्नुभएको थियो । यस वर्ष भने एक क्विन्टल मात्र आलु उत्पादन भएको उहाँको भनाइ थियो ।
पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकावासीको लागि आलु मकै पछिको दोस्रो प्रमुख बाली हो । यस वर्ष मकै उत्पादनमा वृद्धि भएको तर आलु उत्पादनमा भने कमी आएको स्थानीय बताउँछन् । उक्त ठाउँमा आलु उत्पादनमा वृद्धि हुँदा मकै उत्पादनमा कमी आउने र मकै उत्पादनमा वृद्धि हुँदा आलु उत्पादनमा कमी आउने गरेको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१ मैकोटका कर्मसाही घर्तीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वडा नम्बर १ मैकोटमा गत वर्षमा एक हजार ५०० क्विन्टलदेखि दुई हजार क्विन्टलसम्म आलु उत्पादन भएकोमा यस वर्ष भने १ नम्बर वडामा मुस्किलले ८०० देखि लिएर एक हजार क्विन्टल मात्र आलु उत्पादन भएको छ ।
यस वर्षमा आलु उत्पादनमा कमी मात्र नभई आलुको दाना पनि सानो फलेको कृषकले बताएका छन् । प्रतिकूल मौसम, प्राविधिक ज्ञानको कमी, माटो परीक्षण नगरी खेती गर्नेलगायतका कारणले आलु उत्पादनमा कमी आएको हुनसक्ने कृषक बताउँछन् ।
गाउँपालिकावासीले मकै पछिको दोस्रो प्रमुख बालीको रुपमा आलुलाई मान्ने र उत्पादन पनि धेरै गर्ने गरेको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाहीले बताउनुभयो । आलु उत्पादनलाई निरन्तरता दिन र कृषकको समस्यालाई समाधान गर्न गाउँपालिकाले प्राविधिकको पनि व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । रासस
२०७६ पुष १९,शनिबार को दिन प्रकाशित
बुटवल पुर्ण लकडाउन गर्ने उपमहानगरको निर्णय
रेडक्रस दाङले गर्यो १० स्थानिय तहमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
रहेनन् कम्युनिष्ट नेता बरमन बुढा
रोल्पा गंगादेबका १३ जना कांग्रेस कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश गरे
बिप्लब नेकपा रोल्पाका इन्चार्ज इन्चार्ज पक्राउ
कोरोना पुष्टि भएपछी लिवाङ आसपास क्षेत्रमा सिल गरियो
कोराना संक्रमित भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी कोमामा
ओली-दाहालबीच ९ दिनपछि भेटवार्ता
गोंगबु हत्या प्रकरण : अभियुक्त सार्वजनिक, फेसबुकमार्फत भएको थियो चिनजान
गोंगबु हत्या प्रकरणका अभियुक्त ‘कलाकार’, फेसबुकमा अन्तरंग फोटो सार्वजनिक गर्न थालेपछि हत्या !